ရှမ်းရိုးမဗုဒ္ဓအွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက်မှာ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်စာတမ်းတွေသာမကနိုင်ငံရေး၊ သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ စာပေ၊ ရှမ်းလူမျိုးတို့၏စာပေ ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းစတဲ့ စာအုပ် စာတမ်းများကိုပါ အများ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်အောင် ပြန်စာစီစာရိုက်ပြီး တင်ပေးထားပါတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံး အသစ်သစ်သော စာပေစာအုပ် များကို လွှင့်တင်သွားပါမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါ သည်။ အကြံပြုထင်မြင်ချက် ပေးလိုပါက shanyoma1@gmail.com သို့ ထင်မြင်ချက်များ အကြံပြုချက်များ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ရှမ်းတို့သိသင့်သော အခြားသူတို့ရေးသားထားသောသမိုင်း - ဦးစိုင်းစံအိုက်
၂၀၀၀-ပြည့်နှစ်ထုတ် ရှမ်းပြည်နယ်မဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား (၄၅၆)ကီလိုဗိုက်။ (456)KB pdf file.
စံကား-ယွန်းရှမ်းသမိုင်း - ဒေါက်တာစိုင်းစံအိုက်
၂၀၁၀-ခုနှစ် ဧပြီလထုတ် ဆိုင်ပျန်းရှမ်းမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော ရှမ်းဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသော သမိုင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၄၅)ကီလိုဗိုက်။ (245)KB pdf file.
Notes on "Hso Hkhan Hpa" By Hkun Myat Sa
၁၉၅၇-၅၈-ခုနှစ်၌ ထုတ်ဝေသော ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် တိုင်လူငယ်မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါရှိသော ဆေခန်ဖမင်းအကြောင်းမှတ်စုတိုဖြစ်ပါ သည်၊ ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၇.၈)ကီလိုဗိုက်။ (27.8)KB pdf file.
ရှမ်းဟူသောအမည်ဖြစ်ပေါ်လာပုံသမိုင်းကြောင်း - မဟာမှုန့်
၁၉၉၇-ခုနှစ် မေလတွင် ရန်ကုန်မြို့ ရှမ်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအသင်းမှထုတ်ဝေသော ရှမ်းမဂ္ဂဇင်း ၌ လာရှိသော ရှမ်းဟုခေါ်ဝေါ်ရခြင်းအကြောင်းကို အသေးစိတ်ရှင်းပြထားသော သမိုင်း ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်၊ ရှမ်းဘာသာဖြင့်ရေးသားထားပါသည်။ ဖိုင်အရွယ် အစား(၂၂၄)ကီလိုဗိုက်။ (224)KB pdf file.
မြင်းငါးကောင် ရှမ်းစာပေသင်ကြားရေးဖြစ်ပေါ်လာပုံသမိုင်း - ဒေါက်တာစိုင်းစံအိုက်
၂၀၀၇-ခုနှစ် ဇူလိုင်လထုတ် ဆိုင်ပျန်းရှမ်းမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော ရှမ်းဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၄၀)ကီလိုဗိုက်။ (240)KB pdf file.
သီပေါရာဇာပါတော်မူလင်္ကာ - မာဂဓီ(သာစည်)
၁၉၈၅-ခုနှစ် နို၀င်ဘာလထုတ် ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော သီပေါမင်းပါတော်မူပုံကို လင်္ကာ စပ်ဆိုထားသည့်အကြောင်းကို တင်ပြထားသောဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား (၁၂၇)ကီလိုဗိုက်။ (127)KB pdf file.
ယိုးဒယားမြန်မာစစ်(ဟံသာ၀တီကို စောမ်ဒေတ်ဖရနရေစအွန် ပထမအကြိမ်တိုက်ခိုက်ခြင်း) - ဗိုလ်မှူးဘရှင်
၁၉၅၉-ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ထုတ်ဝေသော စစ်ပညာဂျာနယ်တွင် အခန်းဆက်အနေနှင့်
ပါရှိသော ဘာသာပြန်သမိုင်း ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၉၃.၇)ကီ လိုဗိုက်။ (93.7)KB pdf file.
ဆေခန်ဖမင်း - ဒေါက်တာစိုင်းစံအိုက်
၂၀၀၉-ခုနှစ် မတ်လထုတ် ဆိုင်ပျန်းရှမ်းမဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ(၄၉ မှ ၅၆)ထိ လာရှိသောဆောင်းပါးဖြစ် ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၄၄)ကီလိုဗိုက်။ (244)KB pdf file.
နှစ်တစ်ရာကျော်က မြန်မာအင်ပါယာ - ပန်းချီမောင်နေမျိုး(လန်ဒန်)
၁၉၈၅-ခုနှစ် နို၀င်ဘာလထုတ် စာမျက်နှာ(၁၇ မှ ၂၃)ထိ လာရှိသော သမိုင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်၊ ဖိုင်အရွယ်အစား(၁.၉၆)မီဂါဗိုက်။ (1.96)MB pdf file.
ရှမ်းစာဆိုတော်ကဝိအကျော်ကြီးများကို ဂုဏ်ပြုကန်တော့ပါ၏ - ယုဝတီဂျင်းဖောမယ်(အမျိုးသားစာပေဆုရ)
၁၉၉၇-ခုနှစ် ရန်ကုန်မြို့ရှမ်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့မှ ဦးစီးထုတ်ဝေသောရှမ်းမဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ (၁၂၈ မှ ၁၃၂)ထိလာရှိသော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ အရွယ်အစား(၂၈၆)ကီလိုဗိုက်။ (286)KB pdf file.
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်းမှ ရှမ်းမျိုးနွယ် - ဒေါက်တာစိုင်းစံအိုက်
၂၀၀၇-ခုနှစ် အောက်တိုဘာလထုတ် ဆိုင်ပျန်းရှမ်းမဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ(၂၈ မှ ၃၅)ထိလာရှိသော ရှမ်းလူမျိုးအကြောင်းသမိုင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ အရွယ်အစား(၆၄၄)ကီလိုဗိုက်။ (644)KB pdf file.
အခြေခံဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုစာမေးပွဲသင်ခန်းစာ ရှမ်းသင်ပုန်းကြီး - မူစယ်မြို့
၁၉၉၄-ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် မူစယ်မြို့ မဟာ၀န်ကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ဦးနရနာထမှ တာ၀န်ယူ ထုတ်ဝေထားသော ရှမ်းစာပေသင်ကြားရေးတွင် အထောက်အကူအပြု သင်ပုန်းကြီးစာအုပ်ဖြစ်ပါ သည်၊ ရှမ်းစာပေကို သင်ကြားလိုသူများအတွက် အလွန်အသုံး၀င်သော မရှိမဖြစ် စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၄.၃၉)မီဂါဗိုက်။ (4.39)MB pdf file.
အတိတ်ကာလတစ်ခါတုန်းက ရှမ်းသမိုင်း - နန်ချောင်မျိုးနွယ်
ရှမ်းဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော အတိတ်တုန်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရှမ်းတို့၏သမိုင်းဇာတ်ကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။ သမိုင်းကြောင်းကို လေ့လာလိုသူများအတွက် လိုအပ်သော စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ် ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား (၁.၃၁)မီဂါဗိုက်။ (1.31)MB pdf file.
ရှမ်းစာပေသမိုင်း - ဦးကံခမ်းစံဆမ်
ရှမ်းဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော ရှမ်းစာပေစာလုံးများ မည်သို့ ပေါ်ပေါက်လာသည်ကို ပြုစုထား သောသမိုင်းစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၀၂-ခုနှစ် မေလတွင် ဒေါက်တာစိုင်းစံအိုက်မှ တာ၀န်ယူထုတ်ဝေ ထားပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၂.၅၆)မီဂါဗိုက်၊ (2.56)MB Pdf file.
မေးလိုရာရာ မြန်မာစာ(၂၀၁၁-ခုနှစ်) - မောင်ခင်မင်(ဓနုဖြူ)
မင်္ဂလာမောင်မယ်စာစောင်၌ ၂၀၁၁-ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ မေးမြန်းလာသော မြန်မာစာပေ ပိုင်းဆိုင်ရာ အသိခက်ခဲတဲ့စကားလုံးဝေါဟာရ အကြောင်းအရာ များကို ဆရာကြီးမောင်ခင်မင်(ဓနုဖြူ) မှ လစဉ်ဖြေကြားသည်ကို တစ်နှစ်စာအတွက် စုစည်း စာအုပ် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား (၁၃၀)ကီလိုဗိုက်။ (130)KB pdf file application.